Inkinga enkulu practical nge imibono kanambambili lokuziphatha cwaningo ukuthi polarizes ingxoxo. Kushaywa ucingo Contagion Emotional noma Taste, Ties, futhi Time yinhlama abangenasimilo lezi izifundo kanyekanye zonya beqiniso ngendlela ukuthi akusiyo kuwusizo. Ukushiya ukucabanga kanambambili futhi ulimi polarizing akuyona ucingo ngathi ukusebenzisa ulimi kuhlangahlangene ukuze ufihle yokuziphatha engalungile. Kunalokho, umbono okuqhubekayo mayelana nokuziphatha ngeke, ngicabanga iholele ulimi uqaphe ngokwengeziwe futhi eqondile. Ngaphezu kwalokho, umbono okuqhubekayo lokuziphatha ucwaningo icacisa ukuthi wonke umuntu-ngisho abacwaningi abenza umsebenzi kakade kubhekwe "zesimilo" -should balwela ukwakha i ngisho kangcono zesimilo balance emsebenzini wabo.
Inzuzo lokugcina isinyathelo ukucabanga okuqhubekayo wukuthi likhuthaza ukuthobeka yengqondo ebhaliwe, okuyinto efanele lapho sibhekene zezinselele zezindinganiso ezinzima. Imibuzo kwesimilo ucwaningo in the age digital zinzima, futhi akukho muntu oyedwa okufanele ibe beqiniseka ekhonweni lakhe siqu ukuxilonga inkambo efanele of action.